Ndị na-eri ego: Ihe Ntanetị Ntugharị Na-akwụghachi ụgwọ | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 10, 2019 Mọnde, Febụwarị 11, 2019 Douglas Karr
Onweghi otu ubochi nke n’ababaghi ​​nke n’enyeghi m vootu, nyocha, ma obu juo ya. Ọ gwụla ma m nwere afọ ojuju ma ọ bụ na-ewe iwe na a ika, M na-dị nnọọ ihichapụ arịrịọ na-aga na. N'ezie, mgbe ọ bụla, a na-ajụ m maka nzaghachi ma gwa m na a ga-enwe ekele maka ya na a ga-akwụ m ụgwọ.
Ihe nri bụ usoro nzaghachi nke na-enye gị ohere ịnakọta nzaghachi site na ịkwụ ndị ahịa gị ụgwọ. Ha nwere ahụmịhe pụrụ iche gasified ma ị nweta nzaghachi bara uru ị na-achọ. Achọpụtala ikpo okwu dị ka otu n'ime ihe kachasị mfe iji!
Feedier bu ihe eji eme ihe, ma gunyere:
Ihe ndebiri & Bot Creation - Jiri ndebiri akọwapụtara ma ọ bụ bot anyị kere iji kwadebe n'ime nkeji ole na ole, enweghị nsogbu. Hazie logo ahụ, agba agba, ihe mkpuchi iji nweta egwuregwu zuru oke maka nzukọ gị. Mee ya nke gị site na ịtinye ngalaba ahaziri iche, ọdịnaya ọdịnaya, ntinye ederede na ịgbanwe asụsụ. Pụrụ ọbụna rụọ ọrụ gị ụgbọelu maka otu ụbọchị iche.
Soro ndị ahịa gị soro - Zipu ozi ịntanetị ahaziri iche na ndepụta nke aka gị, zipụ ederede ederede na nọmba ekwentị, tinye wijetị mara mma na saịtị gị ma ọ bụ ngwa weebụ, ma ọ bụ mepụta PDF nke ị nwere ike ibuga yana ngwaahịa gị iji nakọta nzaghachi.
Mepụta ụdị ajụjụ 5 bara uru - Feedier na-akwado ederede dị mkpirikpi, NPS score®, mmịfe, họrọ na ogologo ederede na-agbanwe ụdị ajụjụ. Can nwere ike igosipụta ajụjụ dị mkpa nye ndị ọrụ aka nri dabere na afọ ojuju ha, ma ọ bụ mepụta ọtụtụ ajụjụ na-adabere na azịza onye ọrụ mbụ yana ọnọdụ nke ị kọwara. Mara mma animated aghụghọ dị ka ike kacha mma, gamified ahụmahụ.
Nye ndị ọrụ gị ụgwọ ọrụ - Nye Kupọns na ndepụta ego iji gbaa ume n'ọdịnihu ịzụrụ ma na-achịkwa ihe ịga nke ọma na-emeri. Zipu faịlụ ndị ahaziri dị ka ọdịnaya na ndị ọrụ gị yana ozi ịkwụ ụgwọ ha natara. Ma ọ bụ igodo ikike, ọkpụkpọ oku pụrụ iche ma ọ bụ ụdị ozi ọ bụla, Ndị na-ahụ maka enyemaka ga-ezitere gị ya. I nwekwara ike inye ezigbo ego site na Paypal site na Feedier na oke nkesa na ihe puru omume.
Jide ma chịkọta nyocha onye ọrụ na ozi ịntanetị - Gosiputa bọtịnụ akara kpakpando 5 naanị iji mejuo ndị ọrụ afọ ojuju na ikpo okwu ọ bụla dịka Amazon. Gosiputa bọtịnụ na-eso na netwọk mmekọrịta kachasị amasị gị na njedebe nke ahụmịhe nzaghachi. Nweta ihe omuma ohuru site na ichoputa ndi oru obi uto ma juo ha ka hapuru gi ihe omuma zuru oke tinyere email ha. Mbo mbuso ala akwukwo gi ebe obu na achoro ozi ntaneti iji nweta ugwo.
Na-emeso nzaghachi pụrụ iche - Feedier na-ahapụ gị ịnweta ndị ahịa gị site na email na CRM gị. Ewubere akụkọ zuru ezu maka nzaghachi ọ bụla ka ị wee nwee ike ịghọta ndị ahịa ọ bụla n'otu pịa. Ibe akwụ ụgwọ ahụ ga-enye gị ohere ịnweta ndepụta nke ụgwọ ọrụ ekesara ka ị nwee ike ịbanye na ozugbo.
Nchịkọta dị ike - gụnyere ngwaọrụ ejiri, ihe nchọgharị, eserese oge, azịza, afọ ojuju, ọnụ ọgụgụ nke nzaghachi nzaghachi, nleta, mba kachasị mma, oge nkezi, na NPS. Onye na-enyocha isiokwu na-enyere gị aka inyocha azịza gị niile site na ịchọ isiokwu dị mkpa.
Ngwaọrụ Nlekọta - Mbupụ nzaghachi ntinye dabara na nzacha ike gị na .CSV ma ọ bụ .JSON na otu pịa. Jikwaa ndị otu gị site na ọrụ dị iche iche iji nweta ọtụtụ ndị na-emekọ ihe ọnụ dịka achọrọ ịrụkọ ọrụ ọnụ. Nweta ozi banyere ihe na-aga na Akaụntụ gị yana kwa akụkọ kwa izu.
Na-emekọ ọnụ - Feedier nwere ederede JSON REST API ka onye mmepe gị tinye ọnụ na nyiwe na ngwa gị. Zụlite Zapier ZAP site na ndị na-ahụ maka nri na-akpali gị ime omume nke gị oge ọ bụla ị nwetara nzaghachi. Nata ugwo JSON na URL webhook gị mgbe ọ bụla anabatara nzaghachi na nkọwa ya niile.
Na, n'ihi na Martech Zone ndị na-agụ akwụkwọ, lee a 20% ego ego mgbe ị debanyere aha na koodu mgbasa ozi WELCOMEFEEDIER2018.
Banye maka Feedier
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ anyị maka Feedier n’isiokwu a.